Fahasalamana: namono olona telo ny covid-19 - ewa.mg
Fahasalamana: namono olona telo ny covid-19
News - Fahasalamana: namono olona telo ny covid-19
Olona telo no matin’ny covid-19, ny
talata 8 jona teo. Teto Analamanga avokoa izy ireo raha ny tatitry
ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Mbola misy olona 28 vaovao koa
nahitana ny tsimokaretina coronavirus tamin’ireo olona 366
nanaovana fitiliana. Teto Analamanga ny sivy tamin’ireo, efatra
Matsiatra Ambony, telo Ihosy sy Sofia ary roa avy Ihorombe sy
Atsinanana ary vatovavy Fitovinany. Iray avy kosa Diana, Atsimo
Andrefana, Menabe ary Ihorombe.
Mbola misy olona 110 arahi-maso
akaiky ny fahasalamany eny amin’ny hopitaly satria maneho tranga
fahasarotana izy ireo. Tetsy an-daniny, nisy olona 35 sitrana soa
aman-tsara na dia niady mafy tamin’ny fahafatesana aza.
L’article Fahasalamana: namono olona telo ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa WISH2Action: hisitraka tolotra fananahana ara-pahasalamana ireo marefo
19% ny tahan’ny filana tsy voavaly amin’ny fandrindram-piterahana eto amintsika, tanjona ny hampihena izany ho 9%. Mahatratra 38% kosa ny tahan’ny fampiasana ireo karazam-panafody fanabeazana aizana izay heverina fa ampitomboana ho 50% afaka herintaona. Hifototra amin’ireo asa ireo ny andraikitry ny tetikasaWISH2Action izay haharitra telo taona ka hanome tolotra ho an’ny olona marefo sy sahirana amin’ny fananahana ara-pahasalamana amin’ny faritra 21, ankoatra ny faritra Melaky. Hatramin’izay, tsy misy mpijery ireo sokajin’olona ireo toy ny vehivavy manana fahasembanana, tanora, vehivavy sahirana ara-pivelomana…ka tsy afaka nikarakara ny fananahana ara-pahasalamany. Ny Maries Stopes Madagascar (MSM) efa manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ary rafitra miparitaka amin’ny faritra no hisahana ny asa. Ampiasaina koa ny fiara tsy mataho-dalana sy ny moto ho an’ny toerana saro-dalana. Manohana koa ny ivontoeram-pahasalamana Blue Star sahanin’ny tsy miankina. Mamatsy vola ny tetikasa ny fanjakana britanika izay manokana vola 10 tapitrisa euros, araka ny fanazavan’ny masoivoho britanika eto amintsika, dokotera Philip Boyle. Firenena 27 aty Afrika sy Azia no hanatanteraha ny WISH2Action. Tombanana ho 330 000 ny mpahazo tombontsoa amin’ny tetikasa ka ny 15% amin’ireo tanora latsaky ny 20 taona. 38% vehivavy sambany hampiasa fanafody fandrindram-piterahana ary 78% olona sahirana ara-pivelomana. Raha tanteraka ny vina, 370 000 ny vohoka tsy nirina ho voasoroka raha 5 000 ny fahafatesan-jaza tsy hitranga ary reny 630 no ho avotra amin’ny fahafatesana.Vonjy A. L’article Tetikasa WISH2Action: hisitraka tolotra fananahana ara-pahasalamana ireo marefo a été récupéré chez Newsmada.
Tsipy kanetibe – « Mondial La Marseillaise »: nivadika ho rombo ny lalaon’i Marseille sy i Belzika
Ratsy fanombohana ny andiany faha-59, amin’ny «Mondial La Marseillaise», taranja tsipy kanetibe. Fifaninanana tanterahina ao amin’ny Parc Borely, Marseille, nanomboka ny alahady 30 aogositra lasa teo. Niafara tamin’ny gidragidra sy rombo mantsy ny lalaon’i Belzika sy ny ekipan’i La Marseillaise, teo amin’io andro voalohany io.Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa mazava, 13 no ho 1, ry zareo Belza, tamin’izany. Nilamina ny fiafaran’ny fihaonana ary nifandray tanana tsara ny roa tonta. Ry zareo Marseillais no nanambara fa hitondra ny tarehimarika eny amin’ny tomponandraikitra. Natoky tanteraka azy ireo ny Belza. Tsy izay anefa ny nitranga fa nivadi-pitokisana ireo mpifanandrina ka nilaza fa izy ireo no nivoaka ho mpandresy. Saika handeha hanamafy io fandresena azony io i Belzika avy eo no gaga nahita fa resy izy ireo. Niezaka nanazava amin’ireo tomponandraikitra ry zalahy ary nanomboka teo ny gidragidra niafara tamin’ny fifampikasihan-tanana.Vokatr’izay, nisy ireo mpijery sy mpanohana ny ekipa naratra sy vaky loha. Voatery niditra an-tsehatra ireo mpitandro filaminana sy ny mpikarakara ny “Mondial La Marseillaise”. Nanapa-kevitra ny mpitsara fa tsy afaka mandray anjara intsony ny ekipa roa tonta. Marihina fa nahatratra 2 656 ny isan’ireo mpandray anjara, tamin’ity, ka nisy mpilalao malagasy. Anisan’ireny ry Andrianiriana Marc sy i Andry Luc, avy amin’ny ekipa Berre, 13 Marseille, sy ry Avedikian Jean, i Herimanana Claude Herve, Ratsimba Hery Nirina Edmond, ekipan’i Salins Petank, 63 Clermont-Ferrand.Haharitra alarobia 2 septambra ho avy izao ity fifaninanana ity, izay tsiahivina fa tokony ho natao ny 5 – 9 jolay lasa teo, saingy nahemotra noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. TompondakaL’article Tsipy kanetibe – « Mondial La Marseillaise »: nivadika ho rombo ny lalaon’i Marseille sy i Belzika a été récupéré chez Newsmada.
Tale jeneralin’ny Bianco
Anio no hanao ny fianianany, etsy amin’ny Fitsarana tampony Anosy, Andrianirina Laza, tale jeneraly vaovaon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco), izay voatendry tao anatin’ny Filankevitry ny minisitra, natao tamin’ny 25 jolay lasa teo. Tsiahivina fa hisolo toerana an’Andriamifidy Jean Louis, tale jeneraly teo aloha izy, ary hiasa mandritra ny dimy taona tsy azo havaozina. L’article Tale jeneralin’ny Bianco est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – «Can 2021»: “Azo atao tsara ny mitazona ny laharana roa voalohany”, hoy i Dupuis
Nambaran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar fa vondrona azoazo, ny misy an’i Madagasikara, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny toerana any amin’ny “Can 2021”, tanterahina any Kameronina. Raha tsiahivina, ao amin’ny sokajy K, miaraka amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire sy i Niger ary i Kenya no misy ny Barea de Madagascar. “Tokony ho tafiditra ao anatin’ireo roa voalohany, ny Barea de Madagascar. Raha ara-taratasy, ambony lavitra ny Barea, raha mitaha amin-dry zareo Kenyanina sy Niger. Ny Ivoarianina no mafy, saingy miankina amin’ny fanomanana ny zava-drehetra”, hoy izy.Marihina fa samy niatrika ny “Can 2019”, tany Egypta i Kenya sy i Côte d’Ivoire. Raha tsiahivina, tsy nivoaka vondrona ny Kenyanina, raha nihintsana teo amin’ny ampahavalon-dalana kosa ny Ivoarianina.Tafita hiatrika ny dingana famaranana, hatao any Kameronina, ireo ekipa 2 voalohany isam-bondrona, aorian’ny fifanintsanana, izay hatao lalao mandroso sy miverina. Tsiahivina fa tsy miatrika ny lalao savaranonando, intsony ny Barea de Madagascar. Mbola hanao izany kosa i Liberia sy Tchad, Sodan Atsimo sy Seychelles, Nosy Maorisy sy Sao Tomé sy Principe ary i Djibouti sy i Gambia. TompondakaL’article Kitra – «Can 2021»: “Azo atao tsara ny mitazona ny laharana roa voalohany”, hoy i Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
UAJ : resy lahatra amin-dRandrianasoloniaiko Siteny ireo federasiona afrikanina
Mitohy hatrany ny fampielezan-kevitra amin’ny filatsahan-kofidina ho filohan’ny UAJ (Union africaine de judo), ataon-dRandrianasoloniaiko Siteny, manerana an’i Afrika, ahitana ireo federasiona mivondrona anatin’ny Kaonfederasiona afrikanina ny judo. Firenena maro toa an’i Côte d’Ivoire, i Kenya, i Senegaly sy ny maro hafa ny efa nahavitany izany fampielezan-kevitra izany. Resy lahatra ary vonona hifidy azy avokoa ireo federasiona efa notsidihiny sy nilazany ny vinany ho fampandrosoana ny taranja judo eto Afrika. Mandritra izao fitsidihana ataony izao ihany koa ny ampahafantarany ireo ho mpikambana miaraka aminy amin’ny fitantanana ny UAJ, toy ny filoha lefitra, ny sekretera jeneraly, ny mpanolotsaina sy ireo mpikambana hafa. Izy ireo izay samy hofidina ihany koa, mandritra ny datin’ny fifidianana. Tsiahivina fa ny 18 mey ho avy izao, mandritra ny kongresin’ny UAJ any Casablanca, Maraoka, ny hanatanterahana ity fifidianana hitantanana indray ny UAJ ity. Kandidà iray ihany ny hifaninana amin’ny filohan’ny federasiona malagasy ny judo, ilay teratany tchadien, i Abakar Djerimah. Etsy ankilany, manantena fandresena ny filohan’ny FMJ, Randrianasoloniaiko Siteny, raha ny fahitany ny fahavitrihan’ny federasiona efa notsidihiny, izay resy lahatra tanteraka amin’ny vinan’asa narosony.Mi.Raz L’article UAJ : resy lahatra amin-dRandrianasoloniaiko Siteny ireo federasiona afrikanina a été récupéré chez Newsmada.
Basikety-Lalao tsapa: nandresy ny ekipan’ny CosPN ny ekipa nasionaly
Nanatanteraka lalao fitsapana ny ekipa nasionaly, taranja basikety, ny faran’ny herinandro teo, ho fanomanana ny lalao iraisam-pirenena hataon’izy ireo ny volana novambra izao. Ny ekipan’ny CosPN ny nifanandrina amin’izy ireo nandritra izany ka lavony tamin’ny isa 68 no ho 40. Raha io valin-dalao io, azo lazaina ho maivana amin’ny ekipa nasionaly ny nandavo ity ekipan’ny CosPN ity, “na izany aza, mbola misy hatrany ny lesoka mila harenina”, hoy ny mpanazatra. Mbola manana iray volana latsaka eo ny ekipa, mialoha ny hiaingana eto an-tanindrazana hiatrika ny lalao fifanintsanana amin’ny “Afrobasket 2021”, hatao any Kigali Rwanda. Raha ny vaovao voaray, ny 20 novambra izao ny tokony hiala eto an-toerana ny delegasiona malagasy. Miankina betsaka amin’ny fisokafana ny sidina eto amintsika anefa izany, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny basikety, Ramaroson Jean Michel.Tsiahivina fa efa tamin’ny fiandohan’ny volana oktobra ny fampivondronana ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa nasionaly ary mbola mitohy hatramin’ny andro hialana eto an-toerana izy ireo. Mi.RazL’article Basikety-Lalao tsapa: nandresy ny ekipan’ny CosPN ny ekipa nasionaly a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Europa league»: nihintsana ny ekipan’i Hery sy i Ouassiero
Samy resy avokoa ny Linfield FC, misy an’i Hery sy ny CS Fola Esch, ilalaovan’i Ouassiero, teo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny «Europa league», taranja baolina kitra, ny alakamisy lasa teo. Raha tsiahivina, resin’ny Floriana FC avy any Malte, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 tao amin’ny kianja filalaovany ao Windsor Park de Belfast ry Hery Bastien. Baolina tokana matin’i Matias Nicolas Garcia, teo amin’ny minitra faha-10.Henjankenjana ny fifandonana ka niraradraraka ny karatra mavo, na ho an’ny an-daniny na ho an’ny an-kilany. Niafara mihitsy tamin’ny karatra mena azon’i Ross Larkin, mpilalaon’ny Linfield, izany, minitra faha-74. Ankoatra izay, nesorina i Hery, minitra faha-78 noho ny havizanana.Tamin’ny isa tery, 4 no ho 3 kosa ny niondrehan’ny CS Fola Esch nanoloana ny FC Ararat avy any Armenia. Fihaonana notontosaina tao amin’ny kianja FFA Academy Stadium. Efa tany amin’ny fanalavam-potoana vao nivoaka ho mpandresy ny Armenianina, rehefa nitarika tamin’ny isa 3 no ho 1 ny ekipan’i Ouassiero hatreo amin’ny 90 mn. Voasahala izany, tany amin’ny fanampim-potoana (90 + 1 mn) sy (90 + 4 mn). Teo amin’ny minitra faha-113 tamin’ny fanalavam-potoana ny baolina fahefatra naharesy ny CS Fola Esch. Nilalao 10 ihany koa ry zalahy, teo amin’ny faha-90 mn, rehefa nahazo karatra mena i Diogo Miguel Zambujo Pimentel. TompondakaL’article Kitra – «Europa league»: nihintsana ny ekipan’i Hery sy i Ouassiero a été récupéré chez Newsmada.
Governemanta haingam-pandeha ?
Vita ny fitsapana ! Ho fantatra hatramin’ny faran’ity herinandro ity ny ho praiminisitra sy ny mpikambana vaovao ao anatin’ny governemanta. Voafidy ny solombavambahoaka, ny mpikambana isan-tsokajiny ao anatin’ny antenimierampirenena. Araka ny Lalampanorenana, mandroso anarana ny depiote avy amin’ny maro an’isa, mazava ho azy fa ny IRD ary manendry izay safidiny ny filoham-pirenena. Governemanta faharoa ity hitsangana ity.Nilaza rahateo ny filoha Rajoelina, tamin’ny andiany voalohany, fa hotombanana ny zava-bitan’ny minisitra tsirairay nandritra izay enim-bolana niasany izay. Manampy izany anefa, misy amin’ireo minisitra vitsivitsy, voafidy ho solombavambahoaka. Na izany aza, tombanana amin’ny ankapobeny ny vokatra sy ny zava- bitan’ny minisitera tsirairay, ary azo antoka fa tsy misy ny indrafo na ny kinamanamana satria aim-pirenena no resahina.Azo adika izany, fa vita hatreo ny andrana sy ny fitsapana, satria araka ny fanambin’ny filoha, “olon’ny asa” izy, fa mihazakazaka toy ny fiaran-dalamby haingam-pandeha (TGV), araka ny efa nahafantarana azy hatramin’izay. Voamarina izany amin’ireo asa vitany tao anatin’izay enim-bolana voalohany izay, ary tokony haharaka izay hafainganam-pandehany izay koa ny mpiara-miasa aminy, indrindra ny governemanta mpanatanteraka.Laharaham-pahamehana ho an’ny Malagasy 25 tapitrisa ny fijerena ny andavanandrony. Azo tarafina izany amin’ny fiforonan’ny asa, fototry ny fivelomana, ny vidin-javatra takatry ny maro an’isa, ny fandriampahalemana. Zava-dehibe koa ny fitoniana politika hahazoan’ny mpandraharaha eto an-toerana sy ny vahiny, vao hosarihina, antoka ahafahan’izy ireo mampiasa vola maharitra, ka ho azo tsapain-tanana ny fampandrosoana.Maro ny governemanta nitsangana hatramin’izay, miaraka amin’ny fanamby tsara lahatra, toy ny hoe “governemantan’ny asa”, “governemanta hiady”, …. , saingy “ny voa no hitsarana ny hazo”, hoy ny voalazan’ny Soratra Masina.Njaka Andriantefiarinesy L’article Governemanta haingam-pandeha ? a été récupéré chez Newsmada.
«Résidence»-n’ny filoha Tsiranana : naiditra am-ponja ireo olona 5 nivarotra ireo fanaka tao
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao Miarinarivo ny olona miisa dimy voarohirohy amin’ny famarotana ireo entana sarobidy tao amin’ny trano fonenan’ny filoha teo aloha, i Tsiranana Philibert, ao Ampefy, ny 5 jona lasa teo.Isan’izany ny mpiambina ny toerana, atidoha nikotrika ny asa ratsy, ireo namany miisa telo nanampy azy sy ny mpividy ireo entana halatra. Niaiky ny heloka nataony io lehilahy mpiambina trano io taorian’ny nahatrarana azy tao Analavory, ny 8 jona teo. Nilaza ilay lehilahy mpiasa ao amin’ny « résidence » io fa efa nanomboka ny volana septambra 2020 ny namarotany tsikelikely ireo entana sy ny fanaka amin’ny vidiny mora ary tonga hatramin’ny antsasa-bidy mihitsy izany. Taorian’izay, nanondro ireo namany mpiray tsikombakomba aminy amin’ny asa ratsy izy.Fiara iray nitatitra ireo entana halatra ihany koa no nogiazana. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo olona 24 hafa voalaza fa nividy ireo entana halatra taorian’ny fampanoavana afakomaly tao Miarinarivo. « Mbola hitohy ny 7 jolay izao ny fanadihadiana lalina ny raharaha », hoy ny fanazavan’ny zandary avy ao Soavinandriana misahana ny fanadihadiana. Entana sarobidyEfa tafaverina avokoa ny 80% amin’ireo entana sarobidy halatra raha mbola tadiavina kosa ireo hafa. “Nametrahan’ny kaominina mpiambina ihany koa io tranon’ny filoha teo aloha io”, hoy kosa ny fanazavan’ny zandary avy ao Miarinarivo. Fepetra noraisina, hoy izy, ny fanamafisana ny fisafoana ataon’ny zandarimaria eny an-toerana, indrindra ny fitobiany eny amin’ny alina. Natao izany mandra-piandry ny fanapahan-kevitra avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika.Tsiahivina fa ny 5 jona lasa teo, nahazo fampandrenesana mahakasika ireo fahaverezana entana ireo zandary ao Ampefy. Tsikaritr’ireo olona teny an-toerana fa tsy tao intsony ny mpiambina ny tranon’ny filoha teo aloha io, maro ihany koa ny entana very, antony nahatonga ny sefo fokontany avy ao Avarabohitra sy ny ben’ny Tanànan’Ampefy niantso ny mpitandro filaminana. Taorian’izay, nidina teny an-toerana ny zandary nijery ny zava-misy. Nantsoina ihany koa ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika. Hita tamin’izany fa tsy tao intsony ireo entana sarobidy rehetra izay misy vita avy amin’ny andramena. Lasan’ireo tsy mataho-tody hatramin’ny varavarankely, ny varavarambe, ny « moquette », ny karipetra, ny armoara sy ny seza ary ny kojakoja rehetra. Hany sisa tavela tao amin’ny efitra telo sy ny efitrano fandraisam-bahinin’ny trano fonenan’ny filoham-pirenena teo aloha io ireo enta-mavesatra toy ny vata fampangatsiahana, ny lafaoro. FanadihadianaVoalaza fa nividy ireo entana halatra ny mponina avy ao Ampefy sy ny manodidina ary tompon’andraikitra nivarotra izany ny mpiambina. « Ny mpiasa ao ihany no mamoaka ireo entana sarobidy ireo. Rehefa natao ny famotorana, olona 29 ny voasambotry ny zandary ary nanaovana famotorana tao Miarinarivo », hoy Ratolojanahary, mponina ao an-toerana. Nambarany fa mety ho tsy nahafantatra ireo olona mpividy fa entana avy ao amin’ny « résidence » ireo entana novidiany ary entana namidy, antony nahatonga ireo olona roboka tamin’ny fividianana izany. Henintsoa HaniL’article «Résidence»-n’ny filoha Tsiranana : naiditra am-ponja ireo olona 5 nivarotra ireo fanaka tao a été récupéré chez Newsmada.
Hosazina ireo mbola maka fasika etsy Ampasika
Horaisina ny fepetra. Nidina ifotony tetsy amin’ny tetezan’Ampasika sy ny manodidina ny eo anivon’ny sampandraharaham-paritry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (DRTP) niaraka amin’ny Apipa, omaly. Teo koa ny avy amin’ny kaominina Bemasoandro. Anton’izany ny fandavahan’ny mpivarotra sasany ny eo ambanin’ny tetezana, hakan’izy ireo fasika. Ahina hiteraka fahasimbana amin’ny tetezana Ampasika anefa izany. « Horaisina ny fepetra, ary hosazina ireo tratra mbola manohy maka fasika amin’iny faritra iny”, hoy ny DRTP, Andriamalalavonjy Solomanoro. Nohitsiny fa mety hitera-doza mihitsy izany raha mbola mitohy ny fakana fasika eo Ampasika.Araka izany, tsy azo atao intsony ny maka izany manomboka izao ary handraisana fepetra ireo mbola mihoa-pefy mitrandraka ny fasika eo amin’io toerana io.Synèse R. L’article Hosazina ireo mbola maka fasika etsy Ampasika a été récupéré chez Newsmada.
Valin-kafatra amin’ny fivahiniana any Eoropa : tsy nanao vaksiny «miafina» fa notilina PCR ny filoha Rajoelina
Nanaraka ny fepetra rehetra. «Nahavita fitiliana PCR ka tsy mila kara-baksiny ny filoha Rajoelina», hoy ny minisitra Lalatiana Andrian­ton­garivo. Nitondra valin-kafatra manoloana ny resabe amin’ny fivoahan’ny fianakaviana Rajoelina Andry any ivelany ny minisitra sady mpitondra tenin’ny governemanta, omaly. «Nahavita ny fitiliana PCR, efa natao ny 15 jona teo ny filoha sy ny fianakaviany vao nihazo an’i Soisa. Miiba (négatif) na tsy ahitana taratra ny covid-19 ary voahaja ny 72 ora mialoha ny fiangana hanaovana izany», hoy izy, tao amin’ny fandaharana «Tompon-trano tsy mihono», omaly. Nante­riny fa tsy nanao vaksiny «miafina» izany ny filoha Rajoelina Andry. Mazava ny fepetra amin’ny fidirana any Eoropa ary tsy maintsy andalovana ao Soisa. Na vita vaksiny mampiseho ny karatra na mampiseho ny fahavitana ny fitiliana PCR miiba, natao mialoha ny fiangana.CVO + ihanyNotsiahivin’ny minisitra ny nambaran’ny filoha Rajoelina Andry ary mbola notazoniny hatramin’izao fa tsy hanao vaksiny ary tsy mieritreritra ny hanao izany. Mbola voatsiahy tamin’ny alalan’ny sary tao amin’ny TVM rahateo ny nireharehan’ny filoha fa anisan’ny niaro ny tenany sy ny fianakaviany ary natao hiarovana ny Malagasy ny CVO +… Tokony ho tapitra hatreo sy mifarana izany ny resabe amin’ny fahafahan’ny filoha mianakavy miditra any Eoro­pa, hanatrika ny «Confirma­tion» an’ny zanany vavitokana.Synèse R.L’article Valin-kafatra amin’ny fivahiniana any Eoropa : tsy nanao vaksiny «miafina» fa notilina PCR ny filoha Rajoelina a été récupéré chez Newsmada.
Fitakiana ireo Nosy : mangata-panazavana ny Otrikafo
“Mbola misy ve ny fifampiraharahana eo amin’ny firenena malagasy sy ny firenena momba ireo Nosy manodidina? Raha mbola misy, aiza ho aiza izany ? Raha tsy misy intsony, nahoana no najanona?” hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko Otrikafo, Rabevahiny Elia, momba ny fitakiana an’ireo Nosy malagasy manodidina. Tamin’ny 26 jona 2020 no nilazan’ny mpitondra fa tsy maintsy hiverenan’ireo Nosy ireo amin’i Madagasikara. Herintaona aty aoriana, tsy mbola miverina amintsika izy ireo. Tsy fantatra hoe aiza ho aiza isika amin’ny resaka amin’izao fotoana izao?“Heverina fa tokony hitondran’ny fanjakana malagasy sy ireo delegasiona nalefan’ny fitondram-panjakana frantsay fanazavana izany. Samy mangina ny roa tonta izao”, hoy izy.Mahatonga ny Otrikafo manomana ny amin’ny fanohizana ny fitakiana an’ireo Nosy malagasy ireo. Anton’ny fitakiana : ankalazaina isan-taona ny 26 jona lazaina fa fiverenan’ny Fahaleovantena. Tsy mitsahatra mamerina hatrany ny antoko sy ny mpiara-dia aminy hoe: raha mbola misy ampahan-tanin’i Madagasikara eo ambany fifehezen’ny vahiny, sarotra ny mieritreritra fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena. Mbola tolona ny Fahaleovantena, fa tsy mbola afa-mihambo ho tena mahaleo tena isika. Tsy amin’ny maha tany malagasy azy ihany ireo Nosy malagasy ireo fa misy harena ary toerana stratejika.R.Nd. L’article Fitakiana ireo Nosy : mangata-panazavana ny Otrikafo a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Androy sy Anosy : ankizy 50.000 hisitraka ny fanampian-tsakafo mahavelona
Nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia teo ny tetikasa goavana famokarana sakafo ho an’ny mpianatra any atsimon’ ny Nosy. Fantatra tamin’izany fa mpianatra 50.000 any amin’ny faritra Androy sy Anosy no hisitraka ny fa­nampian-tsakafo. Ho maimaim-poana izany any amin’ ireo “cantine scolaire” any amin’ireo faritra ireo.Iandraiketan’ny fondation Mérieux ny famokarana izany fanampian-tsakafo izany. Iarahana amin’ny mi­nisiteran’ny Fanabeazam-pirenena kosa ny fitsinjarana izany any an-tsekoly. Marihina fa nankatoa­vin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia teo ny fandraisan’ny fanjakana an-tanana ny hetra momba ny fampidirana ny entana misy izany fanampian-tsakafo izany eto Madagasikara. Efa nanambara ny fahavononany hanampy an’i Madagasikara ny Fondation Mérieux amin’ny ady amin’ ny tsy fanjarian-tsakafo. Hisy ny fametrahana ozinina lehibe famokarana izany fanampian-tsakafo izany ao Tao­lagnaro.Tatiana AL’article Faritra Androy sy Anosy : ankizy 50.000 hisitraka ny fanampian-tsakafo mahavelona a été récupéré chez Newsmada.
Politikam-pirenena momba ny kolontsaina: lany teo anivon’ny Antenimierampirenena
16 taona ny niandrasana azy… Efa tamin’ny taona 2005 tokoa mantsy no nisy fanovàna farany ny lalàna mikasika ny politikam-pirenena momba ny kolontsaina ka tsy mifanaraka amin’ny zava-misy intsony izany. Nandalo dingana maro ilay volavolan-dalàna mifehy ny Politikam-pirenena momba ny kolontsaina vao tafiditra tao anatin’ny fandaharam-potoan’ny Antenimierampirenena ny fandinihana azy, amin’izao fivoriana ara-potoana izao. Lany nandritra ny fivoriana itambarambe izay nampitain-davitra, omaly, ity lalàna ity. Antoka lehibe ho an’ny sehatry ny kolontsaina ity lalàna ity. Maro ny fanovana nentina, mifanaraka amin’ny fivoaran’ny fiarahamonina sy ny zava-misy manerana izao tontolo izao. Teboka maro koa ny fiarovana ny fototra, toy ny fanajana ny soatoavina nentim-paharazana, ka nametrahana ny fanekena ny maha marolafy ny kolontsaina malagasy. Eo koa ny fifanomezan-tanana ho an’ny soa iombonana amin’ny alalan’ny “Tagnamaro”, ny fampirisihana ny famoronana eo amin’ny sehatry ny kolontsaina, ny fiarovana ny kolontsaina sy ny harem-bakoka malagasy, ny politika momba ny teny malagasy, ny fanomezana tosika ny sarimihetsika sy sarimiaina, ny fametrahana ho matihanina ny mpanakanto isan-tsokajiny ka ahafahany misitraka tombontsoa maro amin’ny alalan’ny fametrahana ny satan’ny mpanakanto, sns. Tsy nametraka olana firy ireo solombavambahoaka nandray anjara tamin’ny fivoriana, na maro aza ireo teboka nanitikitika. Taorian’ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera, Andriatongarivo Lalatiana, sy ny ekipa tarihiny, nolanin’ireo solombavambahoaka ilay volavolan-dalàna. Miandry ny eny amin’ny Antenimierandoholona indray amin’ny dingana manaraka.Zo ny AinaL’article Politikam-pirenena momba ny kolontsaina: lany teo anivon’ny Antenimierampirenena a été récupéré chez Newsmada.